IWholeyile Egqibeleleyo yaseTshayina Eyongezelelweyo Eyongezelelweyo yaMakhaya eLondolozwe Iiglavu zeLatex zerabha zoMvelisi kunye neFactory |Ilanga Elibomvu
China Ihowuliseyili Eyongezelelweyo eMzini omde woMzimba oneLatex iiglavu zerabha zokuhlambela izitya
Izibini ezimbini zeeglavu kunye namalaphu okucoca amabiniYahlula phakathi kokusetyenziswa komsebenzi okwahlukeneyoNgumncedi olungileyo wobomi bakho.
Ihlala ixesha elide:Sebenzisa iRubberAssurance ekumgangatho oPhezulu ingaphinda isetyenzisweVumela izandla zakho zikhuselwe emsebenzini,Iiglavu ze-elastic zifanelekile kuninzi lwepalsGloves kuyilo lwamasuntswana okwandisa ukukhuhlana, ukukubonelela ngokubamba okungcono.
Iinjongo ezininzi:Ukucocwa kweKhitshi Ukuhlamba izitya,Ukuhlamba iimotoNgaphakathi nangaphandle ukucocwaUkuthintela ukudityaniswa kolusu lwesandla ngolwelo oludlekayo.Iiglavu ezinombala oqinileyo, iikhafu ezindeQinisekisa ukuba izandla zakho kunye nempahla yomile.Iisayizi ezintathu ukuhlangabezana neemfuno zamaqela ahlukeneyo.
100% Ukwaneliseka kwesiqinisekiso: Ukuba ufumana naziphi na iingxaki ezisemgangathweni ngeemveliso zethu, okanye ukuba awanelisekanga wamkelekile ukuba usibuyisele kuthi ukuze ufumane imbuyiselo epheleleyo nangaliphi na ixesha.
Ukugcina ikhaya lakho licocekile kwaye licocekile ngoku kulula ngeeglavu zerabha ezimangalisayo!Ikhaphukhaphu, iyasebenza, kwaye kulula kakhulu ukuyinxiba, iigloves zethu zokuhlamba izitya zikhusela izandla zakho kwizinto ezirhabaxa zokucoca kunye nezinye izinto, uzigcina zimanzi kwaye zithambile.
UYILO OLUPHUMILEYO: Ngokungafaniyo nazo naziphi na ezinye iiglavu zesitya, ezethu ziza namagwegwe akhethekileyo akuvumela ukuba uzixhome naphi na.Ngale ndlela, iiglavu zerabha zokuhlamba izitya ziya koma ngokukhawuleza kakhulu ukuze zihlale zicocekile kwaye zigcine imilo yazo ixesha elide.
UKUNXAPHA OKUFANELEKILEYO: Iiglavu zasekhaya zityebile kwaye zomelele, kodwa zikhaphukhaphu kwaye kulula ukuzinxiba.Zithambile kwaye zikhululekile, zigcina izandla zakho zikhuselekile emanzini kunye nezinto zokucoca.Ziyasetyenziswa kwakhona kwaye kulula ukuzicoca nazo.
EZENZIWA UKUQHUBEKA: Ezi glavu zokucoca ikhaya zenziwe ngokupheleleyo nge-latex, imathiriyeli ethambileyo kodwa eyomelele kakhulu eya kuphumelela uvavanyo lwexesha.Iiglavu zokuhlamba izitya azinamanzi, azinabala kwaye azinavumba, ngoko uyonwabela amava okucoca ngokukhululekileyo.
Iinjongo ezininzi:Ukucocwa kweKhitshi,Ukuhlamba izitya, Ukuhlamba iimoto,Ukucoca ngaphakathi nangaphandle,Ukuthintela ukudibana kolusu lwesandla nolwelo oludlekayo.Iiglavu ezinombala oqinileyo, iikhafu ezinde,Qinisekisa ukuba izandla zakho kunye neempahla zomile.Iisayizi ezintathu ukuhlangabezana neemfuno zamaqela ahlukeneyo.
Ngaphambili: Purple Examination Industrial Multi Use Disposable Powder Free
Okulandelayo: Blue Nitrile Examination iiglavu ezitshiphu amaxabiso
Iiglavu zerabha zasekhaya ezithe gqolo ngumhlambi...
Iglavu yasekhaya Intlungu yeGlove yeSilicone Kade...
Iiglavu zokucoca eziphinda zisetyenziswe ukutyeba okungaphezulu kwerabha...
Umbala weFactory Custom Reusable Guantes kuMzi...
Umbala obomvu nomhlophe ophindwe kabini kwishishini le-latex glo...
Iiglavu zokucoca irabha yeKhitshi yokuhlamba izitya...